डाउनलोड VPN Proxy Master APK 2.0.3 को लागी Android
प्लेटफर्म: Android संस्करण: 2.0.3 भाषा: अंग्रेजीफाइल साइज: 11.45 MB
नि:शुल्क डाउनलोड को लागी Android (11.45 MB)
VPN प्रोक्सी मास्टर पूर्ण रूपमा नि: शुल्क र पूर्ण रूपमा असीमित VPN ग्राहक हो। यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, उच्च गति पृष्ठ लोडिङ प्रदान गर्दछ, साथै सबै प्रकारका खतराहरूबाट तपाईंको उपकरणको विश्वसनीय सुरक्षा, चुहावट वा चोरीबाट तपाईंको व्यक्तिगत डाटा, र तपाईंको स्थान ट्र्याक हुनबाट।
VPN प्रोक्सी मास्टरको बारेमा ध्यान दिन लायक पहिलो कुरा यो हो कि त्यहाँ दर्ता गर्न र कुनै खाताहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। अन्य शब्दहरूमा, कार्यक्रमले प्रयोगकर्ता डेटा सङ्कलन वा भण्डार गर्दैन, जस्तै यसले लगहरू र भ्रमण गरिएका साइटहरूको लगहरू बचत गर्दैन। कार्यक्रमको अर्को राम्रो विशेषता गति र च्यानल चौडाइ मा प्रतिबन्ध को अभाव छ।
यसले सहज इन्टरनेट सर्फिङ प्रदान गर्नेछ र तपाईंको मनपर्ने साइटहरूसँग काम गर्नेछ। वैसे, प्रयोगकर्ताको वास्तविक स्थान लुकाउने कार्यको लागि धन्यवाद, तपाइँ इन्टरनेटमा गुमनाम राख्न सक्षम हुनुहुनेछ। VPN प्रोक्सी मास्टरले विश्वका विभिन्न देशहरूमा सुरक्षित सर्भरहरू प्रयोग गरेको हुनाले, तपाईंले साइटहरू र सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन, एक वा अर्को कारणले, तपाईंको क्षेत्रमा उपलब्ध छैन।
कार्यक्रमको मुख्य सुविधाहरू र कार्यहरू
जडान र काम को उच्च गति।
यन्त्र स्क्रिनमा केवल एक स्पर्शको साथ जडान स्थापना गर्दै।
क्षेत्रीय प्रतिबन्धहरू बाइपास गर्दै।
गति वा च्यानल चौडाइमा कुनै प्रतिबन्ध छैन।
सर्भरहरू बीच स्विच गर्ने क्षमता तपाईले नि: शुल्क चाहानुहुन्छ।
विश्वव्यापी 2000 भन्दा बढी सर्भरहरू।
सैन्य ग्रेड एन्क्रिप्शन प्रविधिको प्रयोग।
डबल VPN लाई समर्थन गर्दछ, जसले डबल इन्क्रिप्सन र सुरक्षाको डबल तह प्रदान गर्दछ।
जडान लगहरू वा तथ्याङ्कहरू बचत गरिएका छैनन्।
वास्तविक आईपी ठेगाना लुकाउँदै।
अपरिचित Wi-Fi नेटवर्कमा जडान गर्दा स्वचालित रूपमा सुरक्षित सर्भरमा जडान गर्नुहोस्।
आफ्नो मनपर्ने स्ट्रिमिङ सेवाहरूमा सुरक्षित पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्।
एक स्पष्ट, प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस।
यदि तपाइँसँग तपाइँको यन्त्रमा धेरै थोरै ठाउँ बाँकी छ, तर तपाइँलाई पूर्ण रूपमा कार्यात्मक VPN ग्राहक चाहिन्छ, एन्ड्रोइडको लागि VPN प्रोक्सी मास्टर लाइट डाउनलोड गर्नुहोस्।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यो PRC को क्षेत्रमा कार्यक्रम प्रयोग गर्न असम्भव छ।
एक भरपर्दो र नि: शुल्क VPN ग्राहक खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटबाट एन्ड्रोइडका लागि VPN प्रोक्सी मास्टर डाउनलोड गर्नुहोस्।
नि:शुल्क डाउनलोड VPN Proxy Master 2.0.3 को लागी Android प्लेटफर्म.
फाइल साइज: 11.45 MB
विकासकर्ता: Innovative Connecting
VPN प्रोक्सी मास्टर पूर्ण रूपमा नि: शुल्क र पूर्ण रूपमा असीमित VPN ग्राहक हो। यो प्रयोग गर्न धेरै...